XOG: M/weynaha Puntland oo u socdaalaya magaalada Gaalkacyo & Xili xasaasi ah.
GAROOWE(P-TIMES) – Warar uu helay Warsidaha PuntlandTimes ayaa daaha ka rogaya in Madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Deni uu todobaadka nagu soo wajahan kusii jeedo magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobalka Mudug, oo ay dhawaan ka dhaceen falal amaan-darro, sidaas oo kalena weerar Argagixiso lagu dilay gudoomiyihii gobalka Axmed Muuse Nuur-Yare oo la dhinteen xubno katirsanaa Qoyskiisa.
Warsidaha PuntlandTimes ayaa ogaaday in xildhibaano iyo wasiiro katirsan Xukuumadda Puntland ay hadda kusugan yihin magaalada, si ay ugu gogol xaaraan safarka Madaxweyne Deni, waxaana wararku sheegayaan in uu kulamo la yeelan doono qeybaha bulshada ee gobalka.
Madaxweynaha Puntland ayaa bishii May ee sannadkii hore tagay magaalada Gaalkacyo, wuxuuna xiligaas ku guuleystay in meesha laga saaro Maxkamad Shareeco Islaam oo ay furan lahaayeen beelaha gobalka, taas oo qeyb ka ahayd heshiis ay lagali lahaayeen kooxda Argagixisada ah ee Al- Shabaab.
Siciid Deni ayaa dhawaan sheegay in ay la dagaalamayaan kuwa kasoo horjeeda ammaanka iyo kala dambeynta, isagoo xiligaas sheegay sida ay muhiimka u tahay in ay bulshad wadajir ula dagaalanto kuwa nabadda diidan, wuxuuna ku celiyey sida ay Xukuumaddiisa uga go`an tahay in ammaanka wax kasta laga hormariyo.
Caqabado waa weyn oo xagga Amniga iyo siyaasadda ah ayaa hareeyey Xukuumadii 2dii bilood ee lasoo dhaafay, waxaana muuqatay in ay taasi muujinayso in culeyska ay qeyb ka yihiin shabakado uu sheegay Madaxweyne Deni in ay kasoo horjeedaan Amniga Puntland.